Raw Trenbolone Acetate powder Mambolena sy mpamatsy - Orinasa
Rano Trenbolone Acetate (10161-34-9)
Ny poeta acetate Roul Trenbolone dia heverina ho toy ny iray amin'ireo vokatra mahery vaika ao amin'ny sehatry ny hetsika, izay afaka mitondra tombontsoa maro. Ny atleta sasany dia niantso azy io ho mpanodikodina na mpanjaka iray manerana an'izao tontolo izao amin'ny fanomanana mitovy. Ny tsiranoka rao Trenbolone Acetate dia manana toetra mifatotra mafy. Izany dia mamela ny steroid mba hitady ny mpanamboatra androgen ao amin'ny vatana ary mampifandray amin'ireo singa ireo.
Rano Trenbolone Acetate poeta (10161-34-9) video
Rano Trenbolone Acetate (10161-34-9) Description
Ny vovon-tsakafo Ravin Trenbolone, amidy eo ambanin'ny marika toy ny Finajet sy Finaplix, dia ny fanafody androgen sy anabolic (AAS) fanafody izay ampiasaina amin'ny fitsaboana vétérinaire, indrindra mba hampitomboana ny tombotsoan'ny biby fiompy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny taovam-pananahana. Nomena azy amin'ny hozatra izany.
Ny atleta sy ny bakteria dia nampiasa ny vovony Acetate Raw Trenbolone ho toy ny fitsaboana ara-batana sy fampiroboroboana mahomby mandritra ny taona maro. Misy tombontsoa marobe amin'ny bakteria iray amin'ny fampiasana vovon-tsakafo Trenbolone amin'ny AAS, satria tombanana ho avo dimy heny kokoa ary mahery kokoa noho ny testosteron. Tsy toy ny testosterone, ny vovobony Ravin Trenbolone Acetate dia tsy miteraka tahirin-tsakafo rehefa mahazo volabe. Izany dia ahafahan'ny bodybuilders misimera kokoa, ary izany no mahatonga azy io matetika kokoa ampiasaina rehefa manomana hetsika fifaninanana.
Rano Trenbolone Acetate (10161-34-9) Specifications
Product Name Vovon-tsakafo raozy Trenbolone
Anarana simika Trenbolone acetate; 10161-34-9; Finaplix; Trenbolone 17-acetate; Component TS; Trenbolone (acetate)
molekiolan'ny Formula C20H24O3
molekiolan'ny Wvalo 312.4
mitsonika Point 90-92 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 2 hatramin'ny andro 3
Color Vovonam-bolamena mavo
Solubility Tsy voapoizina ao anaty rano na toaka, tsy marefo amin'ny asidra acétique, ety ety
Application Rano Trenbolone Acetate vovoka dia iray amin'ireo steroides mahery vaika anabolika manana fahaiza-manao fanatsarana lehibe ho an'ny atleta sy ny mpamboly body. Trenbolone Acetate vovoka dia mahomby kokoa noho ny testosterone raha ampiasaina araka ny tokony ho izy sy araka ny toro-hevitra.
Inona no atao hoe vovon-tsolotsaina Roul Trenbolone (10161-34-9)?
Trenbolone acetate ny poezia dia steroid anabolic mahery ary heverina ho ilay steroïnotisma lehibe indrindra amin'ny anabolisy amin'ny alalan'ny atleta maro manatsara ny fampiroboroboana. Io no iray amin'ny steroids amin'ny anabolic indrindra amin'ny tsena ary afaka manome tombontsoa tsy misy toy ny steroid hafa. Trenbolone Acetate vovoka ihany koa dia miaina angano maro ao amin'ny tontolo anterior steroid, saingy antenaina fa ho afaka hamongotra ireo anganongano ireo isika ary hahazo fahatakarana mafy momba ny fitambarana. Trenbolona Acetate vovoka dia aseho amin'ny fomba ofisialy ho toy ny toeram-pitsaboana anabolika anabolic androgenic. Ny hormone Trenbolone dia nohariana voalohany tamin'ny faran'ny 1960 ary ny vera Acetate dia amidy eo ambanin'ny anarana Finajet sy Finaject.
Ahoana ny fomba famonoana vovon-ketsa Roul Trenbolona (10161-34-9) asa
Ny vovon-tsakafo Ravin-tsemboka Trenbolona dia manana toetra mifatotra mafy. Izany dia mamela ny steroid mba hitady ny mpanamboatra androgen ao amin'ny vatana ary mampifandray amin'ireo singa ireo. Ny Testosterone dia manolo-tena amin'ny mpitsabo, fa ny fikarohana kosa dia manondro fa ny Tren Acetate dia mampifandray fifandraisana amin'ny mpitsabo kokoa noho ny testosterone. Ireo mpanome ireo dia mitatitra ny ampahany hafa amin'ny vatana.
Raha vao mihamitombo amin'ny fiovana vaovao ireo mpandray anjara, dia hanery ny vatana handray andraikitra amin'ny fomba samihafa ireo mpandray ireny. Ny fampiasana ny steroid dia afaka manova ny fomba fiasan'ny vatan'ny proteinina sy ny tsiranoka. Raha tsy manova ireo entana ireo ho matavy, dia manamboatra hozatra avy amin'ireo zavatra ireo ny vatana. Mampihena ny vatana amin'ny fanodinana sakafo ho lasa tavy matavy ny voly Acetate Tren ary manakana ny fitehirizana rano. Ny karazam-panafody maro hafa dia mahatonga ny hozatra hisotro rano bebe kokoa, izay mety hahazoana tombony. Ny tsiranoka Acetate ny varotra dia mahomby kokoa noho ny testosterone raha ampiasaina araka ny tokony ho izy sy araka ny toro-hevitra. Ny fiheverana ny zana-tsipika Trenbolone Acetate dia mety ho iray amin'ireo faratampony lehibe indrindra ho an'ny fampivoarana ny fampivoarana ny fampivoarana mba hahatratrarana ny vokatra tadiavina azo antoka sy ao anatin'ny fotoana fohy.
Vovon-tsakafo Ravin-tsemboka Trenbolona (10161-34-9) Dosage
Ao amin'ny dosage of 35-150 mg / day dia matetika ampiasaina amin'ny vata 50-100 mg / andro, ary ny 35-XNUMX mg / day amin'ny ankapobeny dia ny XNUMX-XNUMX mg / day. Raha ilaina ny fampiasana tranbolone ity ambany ity ary ilaina ny fihodinana mahomby, dia tokony hampidirina steroid hafa anabolic hafa. Masteron dia safidy tsara ho an'izany. Ny iray hafa, safidy hafa dia testosterone.
Vola aretin-kisoa Ravola Trenbolona (10161-34-9) Mampiasa
Tren Acetate dia mitovitovy amin'ny maro anabolic steroids hafa. Manatsara ny fahaizan'ny vatanao hampifanaraka ny proteinina izy io ary manampy ny tazomoka ho hitazona anao kokoa azota. Rehefa vetivety dia afaka mamorona proteinina haingana kokoa ny vatanao, ary rehefa be dia be ny tranobongo ho an'ireo proteinina (izany hoe nitroka), dia afaka mihatsara ny fitomboan'ny taova amin'ny sehatr'izany. Ankoatra izany, ny Trenbolone Acetate dia hiasa koa mba hampiroboroboana ny fitomboan'ny tosidra, izay tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana sy fanarenana ireo teboka manerana ny vatanao. Mampitombo be koa ny isa mena; Misy ra mivaingana kokoa, azonao atao ny manatsara ny hozatrao ary manome azy ireo tontolo iainana ho an'ny fitomboana.
Buy Trenbolone acetate poana avy amin'ny Buyaas.com
Vovon-tsolotsaina rao Trenbolone (10161-35-8)
Rohato methyltrienolone roitso (965-93-5)
Rohan Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) poids (23454-33-3)
Row Trenbolone vovoka (10161-33-8)